Zvine Basa Here Kuti Ndinoteerera Nziyo Dzakaita Sei? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Ndichingomuka, ndinobva ndatotanga kuridza nziyo. Ndichingopinda mumota, chandinotanga kuita kuridza nziyo. Kunyange ndiri pamba ndakazorora, kana kuti ndichiita mabasa epamba, kana kuti ndichiverenga, ndinenge ndichingoteerera nziyo. Pese pandiri ndinenge ndichingoda kunzwa nziyo.”—Carla.
Madiro aunoita nziyo akafanana nezvinoitwawo naCarla here? Kana makafanana, nyaya ino ichakubatsira kuona zvakanakira nziyo, zvaunofanira kungwarira, uye zvaungaita kuti usarudze nziyo dzakanaka.
Kuteerera nziyo kwakafanana nekudya. Haufaniri kungoti chamuka inyama, uye unofanira kuziva pekugumira. Chimbofunga izvi:
Nziyo dzinogona kuita kuti unzwe kufara kana wanga wakasuruvara.
“Kana zvinhu zvisiri kunyatsondifambira zvakanaka, ndikangoteerera nziyo dzandinofarira, ndinopedzisira ndava kunzwa zviri nani.”—Mark.
Nziyo dzinogona kukufungisa zvakamboitika.
“Ndine nziyo dzakawanda dzandinoti kana ndikateerera, dzinobva dzandifungisa chimwe chinhu chinonakidza chakamboitika, zvekuti ndinonakidzwa pese pandinodzinzwa.”—Sheila.
Nziyo dzine simba rekuti vanhu vabatane.
“Rimwe zuva ndakabudisa misodzi pandaiva pagungano renyika dzakawanda reZvapupu zvaJehovha, patainge tava kuimba rwiyo rwekupedzisira. Kunyange zvazvo mitauro yedu yainge yakasiyana, nziyo dzataiimba dzaitibatanidza tese.”—Tammy.
Nziyo dzinogona kukubatsira kuti uve neunhu hwakanaka.
“Kudzidzira kuridza chimwe chiridzwa kunobatsira kuti uzvidzore uye kuti uve nemwoyo murefu. Haungoerekani wava kutogona kuchiridza. Unotofanira kuramba uchidzidzira kuti unyatsogona.”—Anna.
Waizviziva here? Bhuku reMapisarema, iro rakakura kupfuura mamwe ese ari muBhaibheri, rinoumbwa nenziyo 150.
Sarudza nziyo dzaunoteerera sezvaunoita zvekudya
Dzimwe nziyo dzakafanana nezvekudya zvine muchetura. Inzwa kuti nei tichidaro.
Nziyo dzakawanda dzinotaura zvinonyadzisira.
“Nziyo dzinofarirwa nevakawanda dzinongotaura zvinonyadzisira. Vanodziimba vacho havachatombonyari kuzvitaura munziyo dzavo.”—Hannah.
Bhaibheri rinoti: “Ufeve nezvinhu zvisina kuchena zvemarudzi ose kana kukara ngazvirege kumbotaurwa nezvazvo pakati penyu.” (VaEfeso 5:3) Zvibvunze kuti, ‘Nziyo dzandinofarira dzinoita kuti zvindiomere kuteerera zano iroro here?’
Dzimwe nziyo dzinogona kukusiya usisina mufaro.
“Dzimwe nguva ndinopedza usiku hwese ndichiteerera nziyo dzinoita kuti ndipedzisire ndava kufunga zvinhu zvinondishayisa mufaro. Nziyo dzakadaro dzinoita kuti nditange kufunga zvinhu zvisinganakidzi.”—Tammy.
Bhaibheri rinoti: “Pazvinhu zvose zvinofanira kuchengetedzwa, chengetedza mwoyo wako.” (Zvirevo 4:23) Zvibvunze kuti, ‘Nziyo dzandinofarira dzinoita kuti ndifunge zvinhu zvinondishayisa mufaro here?’
Dzimwe nziyo dzinogona kuita kuti unzwe hasha.
“Dzimwe nguva ndaimboteerera nziyo dzinoita kuti munhu aite hasha, azvione seasingabatsiri kana kuti angotanga kuvenga chimwe chinhu, asi ndaisatomboona kukanganisa kwadzaindiita. Ndakazoona kuti pese pandaidziteerera ndaipedzisira ndava nehasha. Kana vanhu vekumba kwedu vakanga vava kutozvionawo.”—John.
Bhaibheri rinoti: “Bvisai zvose pamuri zvinoti, hasha, kutsamwa, zvinhu zvakaipa, kutuka, uye bvisai kutaura kunonyadzisa mumiromo yenyu.” (VaKorose 3:8) Zvibvunze kuti, ‘Nziyo dzandinofarira dzinoita kuti ndinzwe hasha here, kana kuti ndisatombova nebasa nevamwe vanhu?’
Saka woita sei? Sarudza nziyo dzaunoteerera. Ndizvo zviri kuedza kuitwawo nemumwe musikana anonzi Julie. Anoti: “Ndinogara ndichitarisa nziyo dzandiinadzo, uye kana ndikangoona paine isina kunaka ndinobva ndatoibvisa. Hazvisi nyore, asi ndinoziva kuti ndizvo zvandinofanira kuita.”
Mumwe musikana anonzi Tara ndizvo zvaari kuedzawo kuita. Anoti: “Dzimwe nguva paredhiyo panogona kuridzwa nziyo inenge iine kabhiti kanonakidza, asi pandinozonzwa mashoko enziyo yacho ndinobva ndatoona kuti ndinofanira kuchinja station. Kuita izvozvo hakusi nyore, zvakafanana nekurega kudya keke rinonaka raunenge wamboravidza uku mwoyo uchirida. Asi kana ndichitombokwanisa kusiya nziyo dzinotaura nezvebonde, ndinobva ndatoonawo kuti ndinogona kukunda muedzo wekurara nemumwe munhu ndisati ndaroorwa. Handidi kuzvinyengera ndichifunga kuti nziyo dzandinoteerera hadzisi kuzondikanganisa.”
“Nziyo dzinogona kunyatsochinja mafungiro atinoita, zvekuti kana tikasangwarira, dzinogona kuramba dzichitikanganisa tisingatombozivi kutozosvikira dzatipinda.”—Abigail.
“Kunyange nziyo yaunongonzwa kashoma chete inogona kugara mumusoro kweupenyu hwese. Saka ukaona kuti nziyo iyi haina kunaka, zvakanaka kuti ubve watosiyana nayo. Ukasadaro, haizobudi mumusoro.”—Robert.
Mibvunzo mitatu inogona kukubatsira kusarudza nekuchenjera.